Kunofuzo oluholela ekuqothukeni kwezinwele | Isolezwe
Kunofuzo oluholela ekuqothukeni kwezinwele
Izindaba / 27 March 2019, 3:23pm / PHILI MJOLI
USOLWAZI Ncoza Dlova waseNyuvesi yaKwaZulu-Natal obenza ucwaningo olungundabuzekwayo oluveze ukuthi impandla kwabesifazane kuyenzeka bayithole ngofuzo
IMITHI yokwelula izinwele enamakhemikhali akuyona kuphela eholela ekutheni abesifazane babe nempandla.
USolwazi uNcoza Dlova, oyiNhloko yophiko lwezempilo eNyuvesi yaKwaZulu-Natal futhi owungoti wesikhumba, uthole ukuthi kunofuzo oluholela ekutheni izinwele ziqothuke zingabe zisamila unomphela.
USolwazi uDlova unconywe emhlabeni jikelele ngemiphumela yocwaningo alwenzile oluveze umsuka weCentral Centrifugal Cicatricial Alopecia (CCCA) okuyisifo esidala impandla kwabesifazane abamnyama.
Lolu cwaningo lukaSolwazi uDlova, ubelwenza ngokubambisana nososayensi nongoti base-United States of America.
Lolu cwaningo olwaziwa ngeVariant PAD13 in Central Centrifugal Cicatricial Alopecia lushicilelwe emqulwini wezempilo iNew England Journal of Medicine, okungumqulu owaziwa ngokushicilela ulwazi olusetshenziswa kakhulu uma kwelashwa kusetshenziswa isayensi, luveze ukuthi ufuzo iPeptidylarginine deiminase 3(PAD13) eyakheka ngesikhathi owesifazane enenkinga yama-protein ezinwele asuke eseshintshe isimo sawo ingena kwiDNA yakhe okwenza ukuthi akwazi ukuyidlulisela nasezingane zakhe.
Iziguli ezineCCCA ebeziyingxenye yabantu okwenziwe ngabo ucwaningo eThekwini, ziqale ukuba yingxenye yalolu cwaningo ngo-2013, ezakwamanye amazwe ziqale ukuba yingxenye yalo ngo-2016 nango-2017.
I-CCCA isifo esidala, ibonakala ngokuqothuka kwezinwele okuba yindilinga, kuleyo ngxenye yekhanda kuphazamiseke isikhumba, okuholela ekutheni izinwele zingabe zisaphinde zimile.
IMPANDLA efana nale kwabesifazane abamnyama kutholakale ukuthi bangayithola kubazali babo ngoba kuyenzeka ithelelane ngofuzo
“Lesi sifo sijwayelekile kubantu besifazane abadabuka e-Afrika. Phambilini bekungaziwa ukuthi yini eholela ekutheni abesifazane bahlaselwe yilesi sifo kugcine sekukhonjwa ukusetshenziswa kwemithi enamakhemikhali efakwa ezinweleni kanjalo nokusetshenziswa kwamakamu ashisayo nezinye izinto zokucwala izinwele ezifakwa kugesi nakho okunomthelela ofanayo,” kusho uSolwazi uDlova.
Umlingisi uGail Nkoane Mabalane usanda kudalula ukuthi naye uphethwe yiCCCA okuholele ekutheni abonakale esegunde izinwele. Uthe izinwele zakhe zaqala ukuphuma ngesikhathi esendaweni yokucwala izinwele eyozigeza.
“Ngathuka kakhulu ngesikhathi ngibona inqwaba yezinwele zami zisala phansi ngesikhathi ngigeza. Ngemuva kwamasonto ambalwa ngilokhu ngithenga ngithi ngizama ukuzelapha ngingawuboni umehluko, ngaya kungoti wesikhumba okunguye owathola ukuthi ngineCCCA. Sengiqale ukwelashwa, ukube ngike ngalinda bengizoze ngibe sesigabeni lapho ngizoba nempandla engeke iselapheka,” kusho yena.